Le pays à l’heure d’un déconfinement partiel - ewa.mg
News - Le pays à l’heure d’un déconfinement partiel
L’article Le pays à l’heure d’un déconfinement partiel est apparu en premier sur Midi Madagasikara.
L’article Le pays à l’heure d’un déconfinement partiel a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Sosialim-bahoaka :: Miverina ny fitarainan’ny olona amin’ny fizaràna Vatsy Tsinjo
Mahazo vahana ary niteraka fitokonan’ny andian’olona maromaro indray ny lisitr’ireo tokantrano misitraka ny Vatsy Tsinjo any amin’ny fokontany sasany eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Nanakoako indrindra ny fihetsiketsehan’ny mponina teny Ambohipo, omaly. Raha misy hatrany ireo milaza ho tsy tafiditra ao anatin’ny lisitra, dia ao koa ireo voalaza fa mahazo fanindroany na mihoatra mihitsy aza an’ity sosialim-bahoaka ho an’ny marefo iharan’ny fiantraikan’ny valanaretina Covid-19 ity. « Fiara lehibe telo no tonga teo amin’ny kianja filalaovam-baolin’ny Oniversiten’Ankatso, omaly (Ndlr : afak’omaly), izay hizara Vatsy Tsinjo ho an’ny tokantrano 2 151. Voatery niala ny toerana ilay fiarabe satria efa niha-maizina ny andro, dia nanomboka taminy 7 ora maraina aza ny fizarana », hoy Rakotoson André, tompon’andraikitra ao amin’ ny fokontany Ambohipo. Nahatezitra ny olona izany satria betsaka ireo efa nilahatra vao maraim-be kanefa tsy nahazo ny anjarany akory. Nody maina indray ireo efa tsy nahazo (Ndlr : afak’omaly), omaly, rehefa nolazain’ireo tompon’andraikitra fa tsy hisy ny fizaràna satria miandry amin’ny andiany faharoa. Niditra an-tsehatra nanararaotra nitondra ny fitarainana hatramin’ireo olona manana olana tamin’ny fizaràna tapakila. Olona valonjato Misy ny nahazo kanefa tsy tafiditra tao anaty lisitra, izay nahatratra valonjato isa. Nisahotaka ny olona ka nandray fanapahan-kevitra ny teo anivon’ny fokontany fa handray ny fitarainan’izy ireo. Itovizana avokoa ny olana miseho eny anivon’ireny fokontany ireny. Nisehoana savorovoro ihany koa teny Itaosy sy Antetezanafovoany, Antohomadinika. Misy olona tena marefo ary tsy mbola nahazo na inona na inona mihitsy hatramin’izay kanefa tsy mbola anisan’ireo hisitraka ny fanampiana na dia nandalovan’ireo mpanadihady tsara aza. L’article Sosialim-bahoaka :: Miverina ny fitarainan’ny olona amin’ny fizaràna Vatsy Tsinjo est apparu en premier sur AoRaha.
Hanatanteraka fitokonana faobe mandritra ny telo andro ny mpiasa ao amin’ny orinasa Kraoma SA, etsy Ampefiloha. Voalaza fa manampy azy ireo ihany koa ny mpiasa any amin’ny faritra. Araka ny fanazavana, dia ny zava-misy iainan’ izy ireo taorian’ny fidiran’ ny orinasa rosianina eo anivon’ny Kraoma Mining no anton’ ity fitokonana ity. “Takianay ny fialan’ ireo rosianina any amin’ ny orinasa Kraoma. Lasan’ izy ireo ambongadiny ny orinasa satria mantsy ny orinasa “Ferrum Mining” no manana ny petra-bola be indrindra ao”, araka ny fanazavan-dRakotomarozafy Mamy Oliva, mpiasa eo anivon’ity orinasa ity, omaly. Nambarany ihany koa fa : “tsy mifanaraka amin’ny ora tokony hiasana intsony ny fotoana iasana any Andriamena ankehitriny. Zary lasa miasa mandritra ny herinandro raha tokony ho andro tsy hiasana ny sabotsy sy alahady raha tsy hoe misy fandaminana manokana”. Araka ny fanazavan’ izy ireo hatrany, nandalo fotoan-tsarotra ny orinasa Kraoma tamin’ny faran’ny taona 2015 noho ny fidirana an-tsehatry ny fanjakana. “Hatramin’izay, ny orinasa ihany no nitady ny mpividy ny vokatra tao aminy. Nampiditra mpividy avy any ivelany nefa ny fanjakana ka noterena namidy tamin’ireo orinasa ireo ny 80% n’ny vokatra na amin’ny vidiny mora be aza izay niteraka fitontonganana ara-bola tamin’ny Kraoma”, hoy Rakotonirina Onja, mpikambana ao anatin’ny fikambanan’ny mpiasa manao fitokonana. “Efa nilaza ny avy ao amin’ny minisitera mpiahy fa hiditra an-tsehatra amin’ny famahana ny olana manjo ny orinasa . Ny fampidirana ity orinasa rosianina ity nefa no nampiharin’izy ireo ho vahaolana. Efa nisy rahateo ny fanaovana sonia fifanaraham-piaraha-miasa roa nifanaovan’izy ireo izay tsy fantatra ny votoatiny. Ity fifanarahana ity izay takianay ihany koa ny fanapahana izany”, hoy hatrany ireo mpiasa. Tsy mbola nanome valin-teny kosa ny avy ao amin’ny minisitera mpiahy, hatramin’ny omaly. L’article FIKASANA HITOKONA :: Mitaky ny fialan’ny orinasa rosianina ny mpiasan’ny Kraoma est apparu en premier sur AoRaha.
Vono olona teny Ivato :: Noafahana vonjimaika ilay lehilahy voatondro ho namono an-janany
Nahazo fahafahana vonjimaika ilay lehilahy, 81 taona, voatondro ho namono ny zanany vavy taorian’ny nampiakarana ny raharaha teo anoloan’ny Fampanoavana, afak’omaly. Teny Mandrosoa Ivato no nisehoan’ity tranga famonoan-janaka ity, tamin’ny alahady lasa teo. Nitantara ny zava-nisy teo anatrehan’ny mpanao famotorana ity zokiolona voarohirohy. “Nisy fifamaliana teo amin’izy mianaka. Voamarina fa tsy salama saina ny zanany vavy ka izy ihany, hono, no nandratra ny vatany tamin’ny antsy, araka ny filazan’ilay raim-pianakaviana”, hoy ny tatitra avy amin’ny zandary. Namita ny fanadihadiana hatramin’ny farany ihany ny mpitandro ny filaminana ary nitondra ny valiny teny amin’ny Fitsarana. Voalaza fa tsy nitory an’io lehilahy lehibe io ireo zanany hafa. Nanapakevitra hanafaka azy vonjimaika ny mpitsara mpanao famotorana eo am-piandrasana ny fotoam-pitsarana. Manazava ny antony mety hanomezana fahafahana vonjimaika ho an’ny zokiolona iray tratra nanao fandikan-dalàna ny mpahay lalàna.“Tsy misy lalàna mamaritra hoe manomboka firy taona ny olona iray no tsy azo alefa any am-ponja. Ny mpitsara mandray ny raharaha no manapa-kevitra momba ny olona efa lehibe mihoatra ny 70 taona. Jerena ny toe-batany hoe mbola matanjaka sa efa marefo sy reraka. Jerena ihany koa ny fomba fiainana ao amin’ny fonja hametrahana azy”, araka ny fanazavana. L’article Vono olona teny Ivato :: Noafahana vonjimaika ilay lehilahy voatondro ho namono an-janany est apparu en premier sur AoRaha.
Fanararaotana tao amin’ny akany :: Lehilahy voampanga ho nanolana ankizivavy kamboty maromaro
Naiditra am-ponja vonjimaika, tamin’ny alakamisy 13 aogositra lasa teo, ny lehilahy iray, valo amby telopolo taona, voampanga tamin’ny raharaha fanolanana zazavavy maromaro tao amin’ ny akany fitaizana zaza kamboty iray, any an-tampon-tanànan’i Fianarantsoa. Mpiasa sady vadin’ ny tompon’andraikitra ao amin’ io akany io ity voarohirohy. Voasaringotra niaraka taminy ihany koa ny ankizilahy iray, dimy ambin’ny folo taona, isan’ireo zaza notaizana ao an-toerana. Sarona, taorian’ny fanadihadiana lalina nataon’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny fihetsika mamoafady (PMPM) any Fianarantsoa, ny fanararaotana ara-nofo nihatra tamin’ireo ankizy tao amina akany iray fitaizana zaza kamboty. Mpiasa ao amin’io toerana io ihany no niantefan’ny fanenjehana. Tamin’ny talata 11 aogositra lasa teo no nanombohan’ ny fanadihadiana. Nidina tany amin’ilay akany mihitsy ny mpanao famotorana. Nampitain’ny loharanombaovao fa mahatratra telo amby sivifolo ny isan’ny ankizy karakaraina ao amin’ny akany. Telo amby dimampolo ny ankizivavy. Telo ambin’ny folo amin’ ireto farany, izay hita fa lehibebe vatana, no nalaina am-bavany tamin’ ny resaka fanolanana, araka ny fantatra. Safosafo sy orokoroka « Nandritra ny fanadihadiana natao tamin’izy ireo no nahalalana fa tsy virijiny intsony sady efa simba ny ankizy efatra: 13 taona sy 14 taona. Tsy nitantara ny marina nihatra taminy anefa ireo ankizivavy ireo. Nambaran’ izy ireo fotsiny fa tonga ao amin’ ny efitra fatoriany ny lehilahy mpiasa iray sady vadin’ny tompon’andraikitra, amin’ny hariva, manafosafo sy manorokoroka azy ireo. Mety ho tamin’izany no nanararaotana nanaovana ny fanolanana. Tsy misy mitondra vohoka kosa izy ireo, taorian’ny fanaovana fizahana”, araka ny tatitra avy amin’ny Officier de police Barinjaka Milius Irma, lehiben’ ny PMPM, any Fianarantsoa. Nosamborina ilay lehilahy voatonontonona. Nandà ny fiampangana azy izy, araka ny fampitam-baovaon’ny mpanao famotorana hatrany. Tonga hatreny amin’ny Fitsarana ny raharaha. “Voalaza fa efa hatramin’ny taona 2018 no nisian’ny fanolanana tao amin’io akany fitaizana zaza kamboty io. Nisy nahatsikaritra ho hafahafa ny fihetsik’ ilay lehilahy, ka teo no nahatonga ny fanairana teny amin’ny mpitandro filaminana. Mety ho amin’ ity herinandro ity ny fanadihadiana lalina eny amin’ny fitsarana misahana ny zaza tsy ampy taona momba izao raharaha izao”, hoy kosa Rakotosamimanana René, tonian’ny Fampanoavana any amin’ny Fitsarana any Fianarantsoa. L’article Fanararaotana tao amin’ny akany :: Lehilahy voampanga ho nanolana ankizivavy kamboty maromaro est apparu en premier sur AoRaha.